An Interview With CILRP
नयाँ प्रविधिले तरकारी खेतीमा वृद्धिका साथसाथै थप आर्थिक उपार्जन भएको छ ।
(UNDP/IMC को सहयोगमा ICDC ले 'सामूदयिक संरचना तथा जिविकोपार्जन सहयोग परियोजना' अन्तर्गत जीविकोपार्जन सहयोग पाएका साविकको चैनपुर ८ निवासी प्रविन शाक्यसँग गरिएको कुराकानी)
तपाईंको परिचय दिनुहोस् न ।
मेरो नाम प्रविन शाक्य हो । मेरो घर साविकको चैनपुर ८ मा छ । मेरो परिवारमा बुवा, आमा, श्रीमती र दुईवटा छोरा गरी ६ जना छौं । म ५ वर्ष कोरियामा काम गरेर फर्केको हो । मेरो अवस्था सुदृढ नभएको हुनाले बैदेशिक रोजगारमा जानै पर्ने अवस्था पछि कोरिया गएँ । ५ वर्षको बसाईमा मलाई कृषि सम्बन्धि धेरै कुराहरु सिक्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । अहिले म यहाँ पनि कृषि पेशामा संलग्न छु ।
तपाईंको यो ठाउँमा कृषिको अवस्था के छ?
यहाँको कृषि पुरै परम्परागत शैलीमा चलेको छ र हाम्रो उत्पादन हाम्रो लागि पनि पर्याप्त छैन । हामीले खाने खाना र तरकारी पनि छुट्टै किन्नु पर्ने अवस्था छ । हामी हाम्रो लागि आफैले उत्पादन गरेर जीविका गुजारा गर्न समस्या छ । हामीकोमा धान, मकै, गहुँ, र तरकारी बाली आफै उत्पादान गर्ने चलन छ । मुद्दा सवाल र चुनौती भनेको कृषिमा व्यवसायीकरण हो । जुन विषयमा म पहिले अनभिज्ञ नै थिएँ ।
तपाईंलाई आई.सी.डी.सी. (ICDC) संस्थाले के कस्ता सहयोग गरेको छ ?
आई.सी.डी.सी. संस्थाले चाहिँ हामिलाई सिंचाई कुलो मर्मत र टनेलको लागि प्लाष्टिक सहयोग गरेको छ । कुलो निर्माणपछि दैनिक कुलो निर्माणको लागि भनेर धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । पहिरोले सधैँ बिगार्ने कुलोबाट अहिले ढुक्कसँग सिंचाई भईरहेको छ । केहि संख्यामा मात्र रहेको टनेल पनि केहि बढी भएको छ । अहिले हामी सबै सदस्यहरु टनेलमा तरकारी उत्पादन गर्दैछौँ ।
तपाईंलाई अन्य कुनै संस्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त भएको छ?
आई.सी.डी.सी. (ICDC) को समन्वयमा जिल्ला कृषि कार्यालय धादिङबाट प्राप्त सहयोगले एक नर्सरी फार्म बनाएको छु । हाईब्रिड जातका बिरुवाहरुको नर्सरीबाट बिरुवा उत्पदन गरेर समूहका सदस्यहरुलाई वितरण गरेको छु । केहि आम्दानी पनि हुन्छ ।
ती सहयोगले के कस्ता परिवर्तन महशुस गर्नु भएको छ ?
धेरै कुराहरु परिवर्तन भएका छन् । कृषिमा पनि आधुनिकीकरण भएको छ, टनेल खेतीको शुरुवात भएको छ, थोपा सिंचाई प्रणालीको शुरुवात भएको छ। उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्घि भएको छ। नयाँ प्रविधिले तरकारी खेतिमा वृद्धिका साथसाथै आर्थिक उपार्जन भएको छ ।
तपाईले कुन कुन तरकारी उत्पादन गर्नुहुन्छ?
मरो टनेलमा गोलभेडा, काउली, बन्दागोभी, प्याज, आलु र अन्य तरकारीहरु पनि लगाएको छु ।
तपाईंको आम्दानी कति हुन्छ?
बजार भाऊमा फरक पर्छ। एक टनेलबाट झण्डै दस हजार हुन्छ । महिनाको रु. चालीस हजारसम्म आम्दानी हुन्छ । मेरो परिवार यसैवाट चलेको छ ।
पहिलेको तुलनामा अहिले कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
आफ्नो देश छोडेर विदेशमा गएर कष्टकर काम गर्नुभन्दा आफ्नै गाऊँमा परिवारसँग हाँसीखुशी जीवन चलाउन पाइएको छ । खुशी नै छु । ऋण खासै छैन, तर पनि बालीमा समय-समयमा लाग्ने रोगको उपचार समयमा गर्न नसक्नु, उपयुक्त वाटोघाटो र बजारीकरणको समस्या छ ।
तपाईंको तर्फबाट आई.सी.डी.सी. (ICDC) संस्थालाई के भन्नुहुन्छ?
आफ्नो चाहना अनुसारको योजनामा सहयोग गर्नु भएकोमा संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद । यस्ता कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा संचालन गरिनुपर्छ । अझ तरकारी खेती सम्बन्धि थप तालिम र बजारीकरण सम्बन्धि विकास गर्नसके यस क्षेत्रमा लाग्न सबैलाई प्रेरणा मिल्छ । आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरुले हामीजस्ता केहि गर्न खोज्ने किसानहरुलाई सहयोग गर्नुहोला । धन्यवाद ।